တရုတ်စက်ရုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်လုပ်မှုဇာတ်လမ်းစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Zhenyuan
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထူးခြားချက်များနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု - SKHZ-B nc H-beam assembly machine
၁။ H-beam ကို welding လုပ်ခြင်း၏ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းမှာ "အလုပ်" ပုံသဏ္accordingာန်အရ h-beam ထားရန်နှင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထောင့်နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ဂဟေဆော်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဂဟေဆော်နိုင်မှုကိုများစွာတိုးတက်စေသည်။ အချိုးကျဂဟေဆော်သောကြောင့်၊ အခြေခံအားဖြင့်ဂဟေဆော်ပြီးနောက်ပုံပျက်သောမဟုတ်ပါဘူး။
2. Orthotic ယန္တရား H-shaped သံမဏိအနားကွပ်စက်သည်ဖြောင့်ဖြောင့်မှုကိုလျှော့ချပြီးတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေသော Excentric press roller အားဖြင့်ဂဟေဆော်ပြီးနောက် hot H-shaped သံမဏိတောင်ပံပြား၏ Angle deformation ကိုတိုက်ရိုက်ပြင်ပေးနိုင်သည်။
၃။ ဂဟေဆော်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များအရ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဂဟေဆော်ခြင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ ပြည်ပရောက်အဆင့်မြင့် h-beam ဂဟေဆော်သောပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ (ESAB ကုမ္ပဏီ) ၏ h-beam welding ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏တိုင်းတာချက်များမှာ အတူတူ။
4. တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စိုက်ထူခြင်း၏လမ်းများတွင်, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စိုက်ထူ၏ပေါင်းစည်းမှုမွေးစားသည်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်း, မွေးစားသည်။
၀ က်ဘ်နှင့်အနားကွပ်ပြားတို့၏အလယ်ဗဟိုတွင်ပုံစံနှင့်ရှေ့နှင့်နောက်ကိုဗဟိုပြုသည့်အစုနှစ်ခုကိုနေရာ ချ၍ တည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
၆။ Wire feeder သည်ဂဟေဆော်သည့်သေနတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးနူးညံ့။ ဂဟေဆော်နိုင်သည့်ထောင့်ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
၇။ ကြီးမားသောဂဟေဆော်ခြင်း၊ စွမ်းအင်နှစ်ဆ (DC + AC) နှစ်မျိုးသုံးဝါယာကြိုးနှစ်မျိုး၊ ရေကန်ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှစ်မျိုးသုံးခြင်း။ ဤထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၏အင်္ဂါရပ်များသည်တရုတ်ပြည်တွင်ပထမဆုံးဖြစ်သည်။
၈။ သွင်းကုန် PLC ထိန်းချုပ်မှု၊
ဘူတာတစ်ခုတည်း၌ပင် ၉။ စိုက်ထူခြင်း၊ ဂဟေဆော်ခြင်း၊ အရိုးအထူးကုခွဲစိတ်ခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း၊
Khj-c ကိုအလျားလိုက်အနားကွပ် corrector
Skhj-c အလျားလိုက်အနားကွပ်ညှိစက်ကို H-beam steel ၏စံကိုက်ညှိခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ H-beam ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသည်နှင့်အမျှ h-beam ၏တောင်ပံပန်းကန်ကိုဂဟေဆော်ခြင်းလျှောက်လွှာ၏လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင်ပုံပျက်လိမ့်မည်။ used.This ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအဓိကအားဖြင့်ဂဟေဆော်ပြီးနောက် h-beam နှင့် T-beam ၏တောင်ပံပန်းကန်များဆုံးမခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
ထိန်းချုပ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းစက် / multi-head ဖြောင့်ဘားဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, CGL-4000 / SECTION သံမဏိဖြတ်တောက်စက်, KT-462 / Semi- အလိုအလျောက်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, CG2-150B / မိတ္တူဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, KG-30 / CNC သုံး Bai ရှုထောင်တူးစက် / radial drilling machine, 7-3040 * 16 / သံလိုက်ဘီးဖြတ်စက်, SAG- / lathe, CA6140 / drilling and milling machine, ZX-32 / koordinate boring machine, T4240 / ဖြတ်တောက်ထားသောလိုင်းဖြတ်စက်, BH6070 / ဒေါင်လိုက်သတင်းစာ, Ya32-31 / အလျားလိုက်ဖိအားပေးခြင်း၊ DC-315 / plate shearing machineJz016-250 / အဆုံးကြိတ်စက် TXSOB / GD-20 / သံလိုက်လျှပ်စစ်လေ့ကျင့်ခန်း RD-32A / DC ဂဟေဆော်နိုင်သော AX5-50 / AC ဂဟေဆော်စက် BXI-500 / C02 ဂဟေဆော်သူ YM-500KR / ရေငုပ်ခြင်း NZA-1000 ဂဟေဆော်စက် / လျှပ်ကူးပစ္စည်းခြောက်သွေ့ခြင်းသေတ္တာ HY704-4
- 50 / flux ခြောက်သွေ့သောမီးဖို HI /4l - လျှပ်စစ်လေထု compressor / ဒီဇယ်မီးစက် ၂၀, 200 kw / sandblasting machine PBS - 100 r / ဆေးမှုတ်ဆေးစက် GPQ9C / fork truckb/ trigger CDWllHNC CPQ - 1-50 * 2500 / ဂဟေ roller frame HGZ - ၅ က / အနားကွပ်ဖြောင့်စက် YTJ 50 / ultrasonic အားနည်းချက်ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ECHOPE220 / ဒစ်ဂျစ်တယ်အပူချိန်မီတာ RKCDP - 500 / ပန်းချီကားအထူမျက်နှာပြင်အကျယ် 345 fb '- MK digital / ဒစ်ဂျစ်တယ်ကလစ် - အမ်မီတာ 2003 / အပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆမီတာ WHM5 / weld inspection rulerSK / သံလိုက်အမှုန်ချို့ယွင်းချက်ရှာဖွေစက် DA-400S / vernier caliper
ကုန်ကြမ်းများ CNC ဖြတ်တောက်ခြင်း→ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ခြင်း→ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း→မျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်း→ပန်းချီကား